I-Ecopod Quintay Frente al Mar (Llega sin contacto) - I-Airbnb
I-Ecopod Quintay Frente al Mar (Llega sin contacto)
Valparaíso, Región de Valparaíso, i-Chile
Indlu encane ibungazwe ngu-Ecopod Quintay
U-Ecopod Quintay Ungumbungazi ovelele
Njengoba ucwiliswe esimweni sezulu esiyingqayizivele saseMedithera saseChile, indawo yethu ikumema ukuthi ushawe umoya futhi uhambisane nempilo nokusimama. Ngokusekelwe kumbono we-Eco Lodging, umgomo wethu uwukuba yingxenye Yokuzizwisa Kokuhamba okungalibaleki e-Chile.
Amahlathi Omdabu, Amabhishi, Ukuqwala Izintaba, Izindawo zokudlela Zasolwandle, I-Scuba Diving kanye Nezikhathi Ezikhuthazayo kuzoholela ekuxubeni okuhle kwemvelo enhle, ukuphumula okuhle kakhulu nezinto ezinhle zedolobhana lokudoba ongeke ukukhohlwe.
I-Eco Pod yethu izokuthutha ikuyise endaweni eyingqayizivele lapho uzoba nakho konke okudingayo ukuze uzizwe ukhululekile futhi ufudumele. Iphefumulelwe ukwakhiwa kwezikebhe nezindlu ezincane kanye nendawo yayo, ngokufinyelela okuqondile ku-"Playa Chica", kuzokwenza uzizwe unenhlanhla.
4.96 · 275 okushiwo abanye
Sitholakala kumakhilomitha angu-2 ukusuka edolobheni laseQuintay. Asinabo omakhelwane, njengoba siphakathi kwehlathi futhi siseduze kakhulu nolwandle, ngakho sihlala nezinhlobonhlobo zezinyoni futhi uma sinenhlanhla, phambi kwethu sibona umndeni wemikhomo udlula.
Ukuthula kuyinto engajatshulelwa, kanye nokuthula okusinikeza khona ukuzola kolwandle kuhambisana nomoya ohelezayo nomsindo wehlathi.
Izinkanyezi ezingapheli zigeza isibhakabhaka sethu futhi ukushona kwelanga kusinika imibono emihle ngemibala ephinki newolintshi.
Endaweni esizungezile ungenza ukuhamba okuhlukahlukene emikhondweni enezindawo ezinhle. Kusukela emnyango we-Ecopod kukhona indlela edlula ehlathini lendabuko "Boldos", "Lúquumos" kanye ne "Peumos" ukuze wehlele e-Playa Chica, enye yengcebo yemvelo yesifunda.
Ibungazwe ngu-Ecopod Quintay
I-Ecopod iphrojekthi yoMndeni eyakhiwe eduze kwendlu yethu. Sihlala futhi sisebenza eQuintay, ngakho sisondelene kakhulu nesivakashi sethu uma kwenzeka kukhona esikudingayo kithi.
UEcopod Quintay Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Valparaíso namaphethelo